ဝမ်းနဲစရာကောင်းတဲ့….. တောင်ကြီးမြို့လေးလောင်းပြိုင်ဈာပနမြင်ကွင်း… - CeleLove
တောင်ကြီးမြို့၊ ကန်သာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ (၁၄)၊ မင်္ဂလာလမ်း ၊ အိမ်အမှတ် (၁၁၈) ရှိ မြင်းဖြူနှစ်ကောင်ဆေးတိုက်နေအိမ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၈)ရက်နေ့ နံနက် ၀၂:၀၀ အချိန်ခန့် ၌ အမည်မသိလူသတ်သမား၏ ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်အတွက် ….
လူမမယ်အရွယ် မောင်စိုင်းဖဖ (၇) လသား ၊ ဖခင်ဖြစ်သူစိုင်းဆေးမွန်း အသက်(၂၇) နှစ် ၊ မိခင်ဖြစ်သူ မနန်းခမ်းလှိုင် အသက် ( ၂၄ ) နှစ်နှင့် အိမ်အကူဖြစ်သူမအေးမိုး အသက် ( ၁၇ ) နှစ်တို့သည်ဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားခဲ့ကြပြီးကြွင်းကျန်ရစ်သောရုပ်ကလပ်များကို ….ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၃:၀၀ ချိန်တွင် တောင်ကြီးမြို့စဝ်စံထွန်းဆေးရုံ( ရင်ခွဲရုံ) မှ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံသုသာန်သို့ပို့ဆောင်၍မီးသင်္ဂြိုလ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ် ….။
မနန်ခမ်းလှိုင်သည် မသေဆုံးမှီည ၁၁ နာရီကျော်အထိ လိုင်းပေါ်တွင်ရှိနေပြီး မီးပျက်မည်ဆိုတဲ့ပို့စ်ကို သူမ၏လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်နောက်ဆုံးရှယ်သွားပြီး နောက်ဆုံး ည ၀၁:၀၀ ချိန်မှာတော့ EPC မှမီးဖြတ်ပါတယ် …။
Photo By SiThu Maung
တောငျကွီးမွို့၊ ကနျသာရပျကှကျ၊ နယျမွေ (၁၄)၊ မင်ျဂလာလမျး ၊ အိမျအမှတျ (၁၁၈) ရှိ မွငျးဖွူနှဈကောငျဆေးတိုကျနအေိမျတှငျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဧပွီလ (၂၈)ရကျနေ့ နံနကျ ၀၂:၀၀ အခြိနျခနျ့ ၌ အမညျမသိလူသတျသမား၏ ရကျစကျစှာသတျဖွတျခွငျးခံခဲ့ရသညျ့အတှကျ ….
လူမမယျအရှယျ မောငျစိုငျးဖဖ (၇) လသား ၊ ဖခငျဖွဈသူစိုငျးဆေးမှနျး အသကျ(၂၇) နှဈ ၊ မိခငျဖွဈသူ မနနျးခမျးလှိုငျ အသကျ ( ၂၄ ) နှဈနှငျ့ အိမျအကူဖွဈသူမအေးမိုး အသကျ ( ၁၇ ) နှဈတို့သညျဘဝတဈပါးသို့ကူးပွောငျးသှားခဲ့ကွပွီးကွှငျးကနျြရဈသောရုပျကလပျမြားကို ….ဧပွီလ ၃၀ ရကျနေ့ နလေ့ညျ ၁၃:၀၀ ခြိနျတှငျ တောငျကွီးမွို့စဝျစံထှနျးဆေးရုံ( ရငျခှဲရုံ) မှ တိုငျးရငျးသားပေါငျးစုံသုသာနျသို့ပို့ဆောငျ၍မီးသင်ျဂွိုလျခဲ့ကွပွီးဖွဈပါတယျ ….။
မနနျခမျးလှိုငျသညျ မသဆေုံးမှီည ၁၁ နာရီကြျောအထိ လိုငျးပျေါတှငျရှိနပွေီး မီးပကျြမညျဆိုတဲ့ပို့ဈကို သူမ၏လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျနောကျဆုံးရှယျသှားပွီး နောကျဆုံး ည ၀၁:၀၀ ခြိနျမှာတော့ EPC မှမီးဖွတျပါတယျ …။